Satashikhabar.com “गर्न नसक्ने कामको प्रतिवद्धता जाहेर गर्दैनौं” – नवीन इजम, उपमेयरका प्रत्यासी उम्मेद्वार, शिवसताक्षी नगरपालिका - satashikhabar.com
स्थानीय निर्वाचन परिणाम
“गर्न नसक्ने कामको प्रतिवद्धता जाहेर गर्दैनौं” – नवीन इजम, उपमेयरका प्रत्यासी उम्मेद्वार, शिवसताक्षी नगरपालिका
नवीन इजम शिवसताक्षी नगरपालिकाका नगर प्रवक्ता तथा शिवसताक्षी नगरपालिका वडा नं. ७ बाट गएको २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा दोब्बर बढी मत लिएर वडा अधयक्षमा विजयी प्राप्त गरेका प्रभावशाली नेता हुन् । उनको वडाको भौगोलिक अवस्था विशाल भएका कारण उनको कार्यकालमा प्रशस्तै वडाका काम गरेर जनप्रिय नेताका रुपमा लिइएको छ । नेकपा एमाले संकुचित र क्रुर हु“दै गएको एमालेको नेतृत्वकालमा संवैधानिक कू गरेको भन्दै ठाडो विद्रोहमा उत्रिएका इजम नेकपा एमाले हु“दा इमान्दार युवा नेताको रुपमा स्थापित थिए । विद्रोहपछि नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा जिल्लाको नेतृत्व गर्दै शिवसताक्षी नगरपालिका नगर कमिटीको अधयक्षको रुपमा अग्रपंक्तिमा छन् । दलभित्र विद्रोह नभए सामन्तवादले जरो गाड्दै जाने भएकाले पनि राजनीतिक पुस्तान्तरणका लागि इजमले जोखिम मोलेर पार्टीको सांगठनिक विस्तारमा लागिरहेका छन् । उनी अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीबीच राजनीतिक गठबन्धन गरी शिवसताक्षी नगरपालिकाका उप–मेयर पदका लागि प्रत्यासी उम्मेद्वार हुन् । उनीस“ग विभिन्न वडाहरुमा लिम्बूवान लयागतका अन्य केही पार्टीहरुले पनि राजनीतिक समीकरण गरेको छ । शिवसताक्षी ७ को नेतृत्व गरिरह“दा विकास निर्माणका काम प्रशस्तै गरेका छन् । विचारमा स्पष्टता काममा लगनशीलता उनको पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ । इजम अहिले निर्वाचनको अन्तिम संग्राममा जनताको घरदैलोमा छन् । निर्वाचनकै सेरोफेरोमा सतासीखबर डटकमले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश तल प्रस्तुत छ ।
जनताको घरैलोसम्म पुग्दा कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो ?
— संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भएपछि मुलुकको संस्थागत विकास गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा यही बैशाख ३० गते दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन हुदैछ । यहाँका नदी नाला, वन जंगल, धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल उर्वर कृषि योग्य जमिन यस नगरका सम्पत्ति हुन् । यहाँका विभिन्न जातजाति, भाषा, धर्म, संस्कृति यस नगरको गहना हो । यिनै चिजहरुको संरक्षण संवद्र्धन र विकासका निम्ति मैले शिवसताक्षी नगरपालिका नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको तर्फबाट उप–मेयर पदमा उम्मेद्वारी दिएको हूँ । स्वभाविक रुपमा समयले भ्याएजति म अहिले जनताको घरदैलोमा छु । नगरबासीले वैकल्पिक शक्ति खोजेका छन् । त्यो वैकल्पिक शक्तिको नेतृत्वमा म छु । म जनता समक्ष पुगेर भोलि गर्न नसक्ने कामको प्रतिबद्धता जाहेर गरिहरहेको छैन । जनताको काम गर्न मैले नगरपालिकामा उप–मेयरको उम्मेद्वारी दिएको हूँ । मेरो उपस्थिति भौतिक रुपमै नगरबासीको घरसम्म पुग्दा मलाई हौसला प्रदान भएको छ । त्यो नै मेरो लागि सेवा गर्ने मौकाको ढोका हो ।
केही त्यस्ता नयाँ योजनाहरु ?
— शिक्षा र स्वास्थ्य समृद्धिका आधार हुन् तर्सथ शिक्षा र स्वास्थ्यमा विषेश कार्यक्रम र योजनाहरु तर्जुमा गरी त्यसको कार्यन्वयन गर्दै गुणस्तर वृद्धि गर्न पहल गर्नेछु । यसका निम्ति केही भौतिक निर्माणका योजनाहरु प्रदेश, संघीय सरकारसँग समन्वय गरी कामलाई अगाडि बढाउने छु । नगरबासीको जनजीविकाका लागि सँधै सकरात्मक पहल गर्नेछु ।
शान्ति सुरक्षाको लागि भावी योजनाहरु के के छन् ? बुदाँगत रुपमा भन्न सक्नु हुन्छ ?
— सम्पूर्ण नगरबासीहरुलाई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूत प्रदान गर्न मेरो जिम्मेवारी ठानेको छु । त्यसका निम्ति मैले निम्न योजनाहरु बनाएको छु ।
क) नगरभरिका मुख्य चौक भिडभाड हुने ठाउँहरुमा सिसि क्यामेरा जडान गर्ने
ख) सडक तथा टोल टोलमा सडक बत्तिको व्यवस्था गर्ने
ग) महत्वपूर्ण बजारहरुमा प्रहरी बिटको व्यवस्थापन गर्ने
जनताका पक्षमा के के काम गर्नुहुन्छ ?
— दैवि प्रकोपहरु आँधीहुरी, नदीकटान, भूकम्प, आगलागी र महामारी तथा हैजासँग बच्न उद्धार, राहत तथा सुरक्षा तयारीको थालनी गर्नेछु । दमकल एम्बुलेन्स, शववाहनको व्यवस्था गर्नेछु । आगलागी नदी कटानका लागि सुरक्षा विधि अपनाउँदै स्वयम्सेवकको व्यवस्था गर्नेछु । जोखिममा रहेका बस्तीहरुको लगत उठाएर त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्नेछु । अशक्त, भूमिहीन, घरबारविहीन नागरिकको सुरक्षामा संवेदनशील भएर लाग्नेछु । स्वच्छ वातावरण कायम गर्न फोहोरको व्यवस्था गर्ने । नियमित खोपहरु र अन्य रोगप्रतिरोधात्मक खोपहरुको व्यवस्था गर्ने । सबै घरमा शुद्ध पिउने पानी पु¥याउने, स्वास्थ्य जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछु ।
युवा लक्षित कार्यक्रमहरु के के छन् ?
— बेरोजगार युवाहरुको लागि सीपमूलक तालिम कृषि परामर्श, पशु विधा कार्यक्रम अनुदानका कार्यक्रमहरु लागू गर्नेछु । हाम्रो नगरपालिका प्रचुर मात्रामा तरकारी फलफूलजन्य वस्तु उत्पादन हुने ठाउँ हो । यसको गुणस्तर र उत्पादनमा विशेष जोड दिदै उत्पादित वस्तुलाई बजार व्यवस्थापन गरेर बेरोजगारी कम गर्दै आम्दानी वृद्धि गर्नेछु । निर्यातमा जोड दिनेछु । सीपमूलक कार्यक्रहरु अगाडि बढाएर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्दै लैजानेछु । यस नगरमा व्यपार, व्यवसाय गर्ने र त्योसँग सम्बिन्धत विज्ञहरुसँग परामर्श लिई सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्दै अनावश्यक झन्झट र खर्च घटाउने । उद्योग कलकारखाना सञ्चालन गरी रोजगारी सिर्जना हुने व्यवसायलाई विशेष प्रोत्साहन गर्नेछु ।
तपाईको जितपछि जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, अशक्तका लागि कस्तो योजना ल्याउनुहुन्छ ?
— जेष्ठ नागरिकहरुको शान्तिपूर्ण जिउन पाउने अधिकारको संरक्षण गर्दै जेष्ठ नागरिक मैत्री चौतारी निर्माण गर्दै जाने । एकल महिला तथा अशक्त जेष्ठ नागरिकका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई अझ व्यवस्थित बनाउँदै जाने । महिला हिंसा, बाल श्रम शोषणको विरुद्ध सरोकारवाला र अधिकारकर्मीहरुसँग समन्वय गर्दै महिला हक अधिकारका कुरा, बाल बालिकाको खाद्य सुरक्षाका कुरा र शिक्षामा पहुँचका कुरा स्थापित गर्ने । हरेक महिना टोल तथा घर घरमै स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने साथै विपन्न परिवारहरुको निःशुल्क स्वस्थ्य बीमा लागू गर्ने रहेका छन् ।
धर्म, भाषा, साहित्य, संस्कृति र पर्यटनको बारेमा कस्तो छ योजनाहरु ?
— सम्पूर्ण नगरबासीहरुको धर्म, कला, संस्कृतिको सम्मान गर्दै विभिन्न चाडपर्वहरु मनाउन पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने । धार्मिक स्थलहरुको संरक्षण संवद्र्धन गर्ने योजना लागू गर्नेछु । यहाँका पर्यटकीय स्थलहरु सतासीधाम, दोमुखा, चिल्लागढधाम आदिका साथै नदी, वनजंगल यहाँका सौन्दर्यका गहना र आम्दानीका स्रोत हुन् । यिनीहरुको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रचारप्रसार गर्दै आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटहहरुको आकर्षण बढाउने कार्य गर्न जरुरी छ । यसका निम्ति विशेष योजना र विकास निर्माणको कार्य गर्नुपर्नेछ । त्यसका निम्ति संघीय तथा प्रदेश सरकार समक्ष योजनाहरु तर्जुमा गरी प्राथमिकताका साथ काम अगाडि बढाउने छु । साहित्यमा नगर स्तरीय एउटा अलगै संयन्त्र तयार पारी लगानी गर्नेछु ।
खेलकुदका लागि कस्तो योजनाहरु छन् ?
— खेलकुदका निम्ति फुटबल ग्राउण्ड, फुटसल हल निर्माण गर्ने योजनाहरु बनाएको छु । साथै खेलकुदको विकास गर्न विभिन्न प्रतियोगिता सञ्चालन गरिने छ । खेलकुद विकासका लागि एकेडेमीहरु सञ्चालन गर्नेछु । खेल सम्बन्धी तालिम तथा रेफ्री उत्पादनका लागि अन्य योजनाहरु बनाउँदै लैजानेछु ।
अन्य केही छुटेका विषयहरु छन् कि ?
— विकास निर्माण सम्बन्धि कार्यहरु, सडक, ढल, पुल, कल्भर्ट, बिजुलीको पोल वितरण, भवन निर्माण, खानेपानी, तटबन्धनमा विशेषगरी प्रदेश तथा केन्द्रिय सरकारसँग समन्वय गरी निर्माण गर्ने योजना बनाउन पहल गर्नेछु । अति आवश्यक र साना योजनाहरुमा नगरको लगानी गर्ने वातारण बनाउन पहल हुनेछ । यसका साथै गर्नेपर्ने कुराहरु धेरै छन् । यसका निम्ति यहाँहरुसँगको सल्लाह, सुझाव, परामर्श र आवश्यकताहरुलाई महत्व दिदै हरेक कुराले समृद्ध नगरको निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।
“नगरलाई जिम्मेवार बनाउन चेक एण्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्त अवलम्बन गर्नेछु” – पवन चाम्लिङ, मेयर प्रत्यास...
राजनीतिक र सैद्धान्तिक विचार समृद्धिसँग जोडिएको छ । – बहादुर आङ्बो
“एउटा समुदाय माथि उठे रैति बनाइ शासन गर्न पाइदैन भन्ने सोच छ ।” – प्रकाश लिङ्देन
“हामीले भावनात्मक रुपमै विकासे मुद्दा बोकेका छौं” – पर्शुराम ढुङ्गाना
सेवाग्राहीलाई ३० मिनेटमा सेवा प्रदान गर्नेछु - दलकुमार शेर्मा
अव्यवस्थित बसोबासीका लागि एक वर्ष भित्रमा सुधार ल्याउने छौं । - महेन्द्र भट्टराई
शिवसताक्षीमा ४१ घन्टापछि मतगणना सुचारु, एमालेको असहमति तथा माओवादी केन्द्रद्वारा पुन:मतदानको माग
शिवसताक्षीमा चाँडै मतगणना सुचारु हुने
अझै सुचारु भएन शिवसताक्षीको मतगणना, नयाँ निर्वाचन अधिकृत मधु पोखरेल
शिवसताक्षी स्थानीय चुनाव-२०७९ ताजा मत परिणाम
झिलझिलेमा विद्युत प्राधिकरणको फ्यूज सेवा पुनः सञ्चालन
शिवसताक्षीमा एमालेको विजयी शुरुवात, वडा नं. १ मा एमालेको प्यानलै विजयी
चुम्लुङद्वारा क्यान्सर पीडित उपचार अभियान सुरु
शिवसताक्षीमा हालसम्म एमालेको अग्रता
शिवसताक्षी नगरपालिकामा ३७ हजार ५ सय ७४ मत खस्यो
प्रतिद्वन्द्वी उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्ने भ्रामक हल्ला पराजीत मानसिकता भएको उप‍‍‍-प्रमुखका उम्मेद्वार नवीन इजमको प्रष्टोक्ति
समृद्धिको लागि नयाँ बिक्रि प्रणाली
दमकमा ऐतिहासिक फड्को मार्दै ओरियन्स नेपाल
बाल शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक सुनिश्चितताका लागि आन्दोलन परिचालन समिति गठन
शेयर बजारमा युवा पुस्ताको बढदो आकर्षण
शिवसताक्षी वडा नं. २ को वडा अध्यक्षमा गठबन्धनतर्फ माओवादीका भिम नेम्वाङ्ग विजयी
सतासी साप्ताहिक खबर पत्रिकाद्वारा सन्चालित
चाम्लिङ पवन राई
शिवसताक्षी न.पा.–८ (झिलझिले, झापा)
२३–४७०६७७ / ९८१८४७२१०७ / ९८४२६३११७६
सूचना विभाग दर्ता नं. : –
Copyright © HulakKhabar.com अन्य वेबसाइटका सामग्रीहरूका लागि SatashiKhabar जिम्मेवार छैन। Designed By : M.S Design Studio.